देश र जनताका लागि त्यागि योद्धा रुपमा परिचित क.किरण गुरुङको संघर्षपूर्ण जीवनी(भिडियोसहित) - Citypokhara
देश र जनताका लागि त्यागि योद्धा रुपमा परिचित क.किरण गुरुङको संघर्षपूर्ण जीवनी(भिडियोसहित)
२०७४ मंसिर् ८ , शुक्रबार
तनहुँ । देश र जनताका लागि संघर्षपूर्ण र त्यागि योद्धाका रुपमा चिनिन्छन्, क. किरण गुरुङ । नेपालको राजनीतिमा लामो इतिहास रचेका गुरुङ जनताको प्रिय नेता मानिन्छन् । अविचलित व्यक्तित्व र बलिदानीपुर्ण संघर्षले क.किरण गुरुङ नेपालको राजनीतिमा सफल राजनीतिज्ञमा रुपमा चिनिन्छ । पूर्वमन्त्री समेत रहेका उनी हाल नेकपा एमाले प्रदेश नम्वर ४ संयोजक हुन् ।
प्रदेश नम्वर ४ को भावी मुख्य मन्त्रीको सम्भावित उम्मेदवार जनताका आस्था, विश्वास र भरोशाका केन्द्र क. किरण गुरुङ आगामी मंसिर २१ गते हुने प्रतिनीधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा तनहुँको जिल्लाको क्षेत्र नम्वर २ प्रदेश सभा २ का वाम गठबन्धनका साझा उम्मेदवार(चुनाव चिन्ह सुर्य) हुन् । भिडियोमा हेरौं उनको राजनीतिको संघर्षपूर्ण जीवनी ..